Isikhuseli seKhitshi laseNickel kunye neTsala yesiKhangeli esisezantsi
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Tsala iiFaucets / WOWOW Ikhitshi lokuntywila lokuZinkcinkca Cofa ukuKhupha iNickel eBrashi
WOWOW Ikhitshi I-Sink Mixer Yikhuphe Isitshizi ngaphandle kweNickel
ikaliwe 4.93 Kwi-5 esekelwe kuyo 54 amanqaku umthengi
(54 ncomo ngumthengi)
Yenzelwe abo bafuna umxube ofanelekileyo woyilo lwanamhlanje, ukusebenza, kunye nomgangatho opheleleyo, i-wowow Faucet Collection ibandakanya ukuhanjiswa kwesitayile samanje ngesiphatho sase-lever esifanelekileyo. Uyilo lwe-arc spout ekhitshini lokuntywila ekhitshini lunika ukubonakala okungaphelelwa lixesha kunye nokuhonjiswa. Ukongeza i-nickel yokugqiba etyibilikayo, icocekile kwaye ilungile. Ukongezwa okumnandi kwikhitshi lakho langoku!
2311601 imiyalelo yokufaka
Isitayile esahlukileyo: Isicimi seFout ekhitshini 2311601-yaphithizela njengeSink eyongeziweyo, isiseko sinciphile kumphezulu kwaye sibanzi kwisiseko, esi sakhiwo siyakuphepha ukujikeleza xa ujikeleza, kunye neNdawo efanelekileyo yeenqanawa zasekhitshini zenkqutyana inokulunambitha ngakumbi , Nikeza ikhitshi lakho iFessess fesses
Iindlela ezi-3 zokubeka: Gcwalisa / ukuhamba / ukutshiza, ukuhamba ngamandla kungagcwalisa ihlumelo ngokukhawuleza, uhlambe ikona nganye yesinki, isitayile sokutshiza usebenzisa ukuhamba ngokutyibilikayo nokuqhubekekayo ukugungxula iziqhamo kunye nemifuno ngokuthambileyo, kunye nendlela yokuphumla imisa amanzi naliphi na ixesha elinikiweyo lokonga amanzi, ukusebenziseka nokonga umbane
Umgangatho ophezulu: Iimpompo zekhitshi ezi-nickel eziqholiweyo zineqhosha lesinyithi elenziwe nge-Bronze eyenziwe ngobhedu oluhle kakhulu, ukuqinisekisa ukuba umgangatho wamanzi ngaphandle kwezimbiwa kwaye ukhokelela ekufumaneni amanzi akhuselekileyo, isinyithi se-zinc / itawuli yasekhitshini engenamandla
Indawo yokuhlamba enkulu: Indawo yokuhlambela ekhitshini ene-1.5 m (ubude obugcweleyo) ipayipi ye-PX ibonelela ngendawo enkulu yokuhlamba, ilungele ukusebenza kabini kwendawo yokusebenza, le faucet yesitshixo yeyona iluncedo kakhulu ukwenza umsebenzi ophindayo!
Izinto eziluncedo kumngxunya wokutsala isitovu sodwa ekhitshini
Isikhupheli sokudonsa ezantsi simahla kwaye sibushelelezi, kwaye sinokubuyiselwa kwisimo saso esichanekileyo ngokuchanekileyo nangokulula akunamsebenzi apho wolule khona. Ukucofa kwisikhombisi kunokutshintsha phakathi kwamanzi okuhlamba kunye nemodi yokuphuma kwamanzi ngokuthanda, ukuphela okukhulu. Ilula ukusebenza, ithathela ingqalelo yonke indawo oyifunayo.
I-SKU: I-nickel eyi-2311601-briking iindidi: IFaucets yasekhitshini, Tsala iiFaucets tags: Ikhitshi lokuKhangela ekhitshini, Ukutsalwa kwesiphatho esinye, Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
22 x 11.1 x 3 intshi
Ndikhethe kakhulu, ndenza uphando oluninzi kwaye ndihlala ndisiya kwiimpawu zamagama kwaye ndingaze ndiye ezantsi emgceni, kungoko ndenze uphando olunzulu ngaphambi kokuba ndongeze igama lam elingaziwayo kum kuluhlu lwam olufutshane lweempawu ezaziwayo uyilo olufanayo ngaphezulu kokuphindwe kabini okanye kathathu ngexabiso. Le yimveliso esemgangathweni esemgangathweni, uyilo olutsaliweyo kunye nenqaku lokutshiza luyamangalisa, iisinki zam azikaze zicoceke kangako! Ekuphela kwento andinakuthetha ngayo kukuphila ixesha elide ngoba sele iphela inyanga, kodwa njengoko uninzi lweefompu zasekhitshini lusetyenziswa rhoqo, kwaye andinasizathu sokucinga ukuba ayizukuhlala ngokufanayo neempawu ezibiza kakhulu. Ukhetho olukhulu, yiya ngalo, gcina i $, ndonwabile ukucebisa ngeenkwenkwezi ezi-5.
Awukholwa ukuba inzima kwaye ikumgangatho ophezulu njani intsimbi engenasici. Ngexabiso, ungafunga ukuba kukho into ekurholayo, isinyithi esinexabiso eliphantsi, ukwakha umgangatho ongekho mgangathweni… into. Hayi, yinto nje esemgangathweni esemgangathweni yokuhambisa ithumbu ngexabiso eliphantsi. Ngokukrakra, ukuba le ibiyi- $ 100 ngaphezulu bendizakuyithenga kwaye ndonwabe ngokuthenga kwam. Oku kuhle kakhulu kwisivumelwano sokudlula.
Le faucet ithatha indawo yeminyaka eli-15 "yegama lophawu" yeyunithi yokuphatha enye enentloko yokutsala ezantsi. Le mpompo yayiqale ukuvuza kwiindibano zevalufa emzimbeni womzimba kwaye ndandingafuni ukuzama ukuzilungisa. Kusetyenzisiwe iiyure ezi-2.5 ukuya kwezi-3 ukukhupha iyunithi yakudala… umhlwa kunye nemicu ehlanjiweyo yenze ukuba le ndawo yomsebenzi iphantse ibuye. Oko kunye noyilo olubi lweyunithi endala yenzelwe igazi elininzi, ukubila, kunye neenyembezi kwicala lam.
Kwelinye icala, itepu entsha yafakwa kwaye yavavanywa malunga nemizuzu engama-35. Imisonto emibini edityanisiweyo yegalelo elitshisayo nelibandayo kunye nonxibelelwano olukhulu olunye lomsonto kwitepu yokuntywila ujongano… voila, yenziwe.
Yonke into ibandakanyiwe ekupakisheni (ngaphandle kwetheyiphu yokutywina); Iplate ye-escutcheon, iigaskets zokugcina, i-allen wrench, kunye ne-3/8 ukuya kwi-1/2 iadaptha zonxibelelwano olushushu / olubandayo (ukuba kukho imfuneko)
Emva kwayo yonke loo nto ithethwayo itepu entsha isebenza ngokukuko kunye nokuphuculwa okuhle kakhulu kwendala. Ndingayincoma kakhulu kwaye ndingongeza ukuba ixabiso belimalunga ne-75- $ 100 ngaphantsi kwegama elilingana negama lophawu. Ukuba oku kuhlala ixesha elide kunaleyo iyithathileyo, ndingavuya kakhulu.
ndandithandabuza ukuthenga uphawu olungaziwayo, kodwa emva kokufunda uphononongo ndaye ndagqiba kwelokuba ndihambe. Ukufakwa kwakulula kakhulu xa kuthelekiswa nabanye. Akukho sidingo seplumbers putty esothusayo. Uxinzelelo olunikwa yile faucets alufani nantoni na endinayo evela kwiimpawu ezaziwayo. Andikwazi ukucebisa oku ngokwaneleyo. Sifake iCawa, ke ziintsuku nje ezimbalwa ubudala (namhlanje nguLwesibini). Ukuyithandazela kuhlala ixesha elide emva kweminyaka emi-5 eyaziwayo yohlobo lwam lwentengiso. Gcina imali yakho kunye noku-odola le faucet!
Njengomntu ohlala eflethini owayefuna ukubuyisela itompu yasekhitshini yakudala, oku kwabonakala ngathi yenye yeemveliso ezilungileyo kakhulu ukuba ziyinyani. Kodwa emva konyaka onesiqingatha wokusetyenziswa okuqinileyo, kunye namava amnandi enkonzo yabathengi, ndingatsho ngokukhuselekileyo ukuba esi sesinye sezona zivumelwano zibalaseleyo endakha ndazifumana kwiWOWOW.
Ukufakwa kulula. Kulula kakhulu ukuba ndingathandabuzi ukuyisusa kwaye ndiyibuyisele emva kokufudukela kwenye indlu. Njengoko omnye wabavavanyi watshoyo, unokufuna ukutshintshela iithumbu ezishushu nezibandayo ukuze ukutsala i-lever kuwe kubanda kwaye ukutyhalela kude kushushu, kodwa loo nto ayikufanelanga nokuba uthathwe njengempazamo.
Okubaluleke ngakumbi, ijongeka kwaye isebenza kakuhle. Ndicinge ukuba ngeli xabiso kungabonisa uhlobo oluthile lokunxiba okanye amabala ngokukhawuleza, kodwa bendingalunganga. Inokuphosakela ngokulula ngombhobho wokugqibela onokuthi uhambe kathathu okanye uliphindaphinde ixabiso. Intloko yombhobho kunye nombhobho ulinganiswe kakuhle ukuze wandise ngaphandle komzamo omncinci kwaye ukhuseleke kakuhle xa urhoxisiwe, kwaye iswitshi yokutshintsha phakathi kwemilambo kunye neqhosha lokumisa ukuhamba ibekwe kakuhle kwaye ayisoze yasilela. Ukugqibelela.
Le tephu ibaluleke kakhulu, kufanelekile kwaye ugqibe ziinotshi eziphezulu. Kwakhona, ulawulo lobushushu kunye noxinzelelo lwamanzi ziphezulu. Ukufakwa kwakulula kakhulu, ekuphela kwesixhobo esifunekayo kufakelo lwam yayisisitshixo sokuqinisa imigca yesondlo kwindawo yokumisa i-engile eludongeni phantsi kwesinki. Inkqubo esetyenzisiweyo ukuqinisa itepu esinkini ilungile nangona iphume, ilungile nje into yokuba unokubamba uqinise phantsi kwesinki ukugqibezela ufakelo.
Ndikhetha le faucet ngaphezulu kwe faucet efanayo yaseMelika endaweni yayo. Kwakulula ukuyifaka, ndinommiselo kunye noxinzelelo olungcono, kwaye ndikhetha ukubonakala kwetephu yeWOWOW. Njengobhonasi le faucet yayiyi- $ 93.44 kwaye i-American Standard faucet yathatha indawo yayo yayi- $ 170 kwiminyaka emi-5 eyadlulayo!
Andikwazi ukuphawula ngobomi obude kodwa ngokucacileyo, kodwa iza newaranti yeminyaka emi-5, kwaye ngokusekwe kwimvakalelo yompompo andithandabuzi ukuba iya kuhlala ubuncinci ixesha elide. Ifayiphu yangaphambili yahlala kancinci ngaphezulu kweminyaka emi-5.
Kudala sisebenzisa itompu kwiiveki ezi-6 ngoku, ijongeka intle kwaye iyasebenza. Ukufaka kwakulula, ndiyathanda ukuba indawo yokubamba inokwenziwa ngokwezifiso ukuseta kwakho. Kananjalo njengaleyo ipleyiti yokugquma eminye imingxunya yafakwa ngaphandle kwentlawulo. Zombini imilambo eqinileyo kunye nesitshizi ziyilelwe kakuhle kwaye musa ukutshiza amanzi kuwo wonke. Umsebenzi wokutsala usebenza kakuhle; Ndiyayithanda intambo enesisindo endaweni yomthombo wentambo yokubuya. Impompo kulula ukuyigcina icocekile, ayibonisi zimpawu zeminwe.
Umbhobho wathunyelwa ngaphandle kweewashi ezimbini ezisetyenziselwa ukuvala itepu endaweni yayo. Ndiqhakamshelane ne-WOWOW nge-imeyile kwaye ndafumana impendulo ekhawulezileyo yokuba baya kuthumela ezintsha kwaye bandinika ulwazi lokulandela ngomkhondo ngenqanawa, evela China. Ndiyibala njengenkonzo ebalaseleyo kunye nemveliso egqwesileyo.
Ndiphengulule iimpompo ezininzi apha kwaye ndafumanisa ukuba le ineGxeko ncomo kulo lonke igama leefompu zophawu ngaphandle kokukhetha. Sasikulungele ukuchitha iidola ezili-150- $ 200 kwimpompo kodwa njengoko kwafumaniseka ukuba le yeyona nto ibhetele. Sasine-Moen kwaye sasisebenzela kakuhle iminyaka emininzi kodwa ukuba sisisitayile esidala sokuphatha umbhobho umfazi wam wayefuna ukuphucula indlela entsha ukuze sikhethe le. Ifike kwangoko kunokuba bekulindelwe, yafakwa kakuhle kwaye inamalungu ongezelelweyo afakiwe.
Le faucet iyamangalisa. Yayibhere yofakelo kodwa kwakungekho siphoso kule mveliso. Yabona, bathi ngumsebenzi we-DIY nabani na onokuwenza kodwa abakhankanyi ukuba iingcali mhlawumbi zazifakela itepu ngaphambili.
Kuthathe iintsuku ezi-3 ezaphukileyo zokufunga nokundikrazula ukuze ndidibanise itompu endala kwaye ndikwazi ukuyikhupha kwaye ndicime isinki. Ingcebiso elungileyo endinokuyithetha kukuqinisekisa ukubandakanya indleko zesikipa kulo msebenzi. Iphawulwe njengeyona nto "intle ukuba nayo" kodwa iyimfuneko. Kwimeko yam, akukho sitshixo okanye isixhobo sasincinci ngokwaneleyo ukuba singene kuloo ndawo kwaye sikwazi ukujikeleza kwaye sikwenze oko ngokwaneleyo ukuba ndinqamle itompu ekusenokwenzeka ukuba ibikhona ukusukela oko indlu yakhiwa kwii-40s zakudala.
Nangona kunjalo, nje ukuba ndikwazi ukukhupha izinto ezindala, ukufakela kwakuhamba ngokuhamba kakuhle. Imikhombandlela kunye nevidiyo ikukhokelela kuyo yonke into kunye nokuphela kwento endandinayo yokujongana nemibhobho endala apho ndinonxibelelwano olwahlukileyo kunemiyalelo ebonisiweyo. Yaphela ilungile, kodwa ndifuna ukuphanda kwaye ndiqiniseke ngaphambi kokuba ndigqibe ulwandle lwamanzi phantsi.
I-faucet entsha itshintshe ikhitshi lam. Ayisijongi nje kuphela kodwa iqela leenkcukacha "ezincinci" zongeza kuphuculo olukhulu lokuphila kwam. Okokuqala, ndathenga isepha yokuhambisa ukuhamba nale nto. Ke oko kuphelisa isidingo sokuhambisa okungabonakaliyo ehleli ngasemva kwesinki. Kwaye okoko "izibambo" zakhelwe ngasemva kwetephu, isusa zonke ezo knob zincinci emva kwesinki nazo. Ngoku ndinegumbi elingenanto apho ke likhangeleka licocekile kwaye lixinekile.
Ukongeza, kuba le faucet inde kakhulu, ndiyakwazi ukuhambisa ngokulula iipani ezinkulu kunye neebhodi zokusika kunye namashiti ecookie phantsi kwayo ukuze zicocwe ngokufanelekileyo. Ngepompo yam yakudala, yayilungiswe malunga nee-intshi ezi-6 ukuya phezulu, yayiyiyo yonke into ekwakufuneka uyenze xa uhambisa izinto phantsi kwamanzi ezaziza kuthi ziphele zifake ikhawuntari, mna, okanye umva wesinki ngokungaphephekiyo.
Ukongeza, kuba isiphatho siyasuswa ndinokuzisa amanzi kwizinto ezinkulu kunenye indlela ejongene nokwenza ukucoca kube lula. Ndifumanise ukuba ndingatshintshela kumbhobho wokutshiza ndiyizise kanye kwindawo enqatyisiweyo ekutyeni kwaye iza ngqo, apho iisosi zisiza kanye xa ndiguqula umlomo wombhobho ndisiya phezulu phezulu embizeni.
Ngaba sinokukhankanya ukuba umlomo wam wangaphambili wokutshiza wawungekho uxinzelelo konke konke ngenxa yoko kwakungenakwenzeka ukusebenzisa. Umsebenzi wokutshiza koku undazise kubuqaqawuli obukwazi ukutshiza okune-caked ekutyeni kunokukuhlikihla rhoqo.
Kulula kakhulu ukukwazi “ukubetha” itepu ngengalo yakho ukuvula amanzi xa izandla zakho zimdaka kunokuba ujike iqhina, uhlambe izandla, emva koko uhlambe iqhina. Ke kuphucula ukupheka ekhitshini lam kakhulu.
Ndinezimvo ezibonakala ngathi kwaye zisebenza njengemodeli ebiza kakhulu, apho ndiyazi ukuba ndiyithengile ngexabiso elifanelekileyo. Ndiyayithanda le faucet! Imveliso yeenkwenkwezi ezi-5. Isebenza kakuhle, iza nayo yonke into efunekayo ukuyifaka, kwaye ibambe ngoku ubuncinci iinyanga ezi-4 kwaye ndiza kuyihlaziya ukuba ayenzi njalo. Ekuphela kwento engafikanga kunye nalo naluphi na uhlobo lweetape zombhobho. uninzi lwabo lucebisa ukusebenzisa into ukukhusela unxibelelwano.
Oku kundithathe kuphela malunga nemizuzu eli-10 ukuyifaka emva kokuba ndisuse itephu yam endala. Kwakulula kakhulu ukuyifaka, kwaye ukuba nje indawo apho ubunzima kunye nethumbu litsalela isibambo licacile, intloko ibuya ngokulula nangokuqinileyo. Inye into endingayithandiyo, yonke imifanekiso ibonise isiphatho kwindawo emi nkqo. Ndacinga ukuba amanzi ashushu athe nkqo ngokugqibeleleyo, kwaye amanzi abandayo athe tyaba ngokugqibeleleyo. Endaweni yoko, xa ufakelwe isiphatho ngasekunene, amanzi abandayo angama-45 ° ngakwindawo yangasemva kwaye amanzi ashushu angama-45 ° ngakumgxobhozo okanye kumsebenzisi. Xa ucinga ukuba ungayijikeleza itompo ukuze isiphatho siye embindini, iyavakala into yokuba amanzi abandayo angasekunene kunye namanzi ashushu ngasekhohlo, kwaye ukuba ufuna ukufaka isiphatho kwicala lasekhohlo, ayizukuba sengqiqweni into yokuba isiphatho sijike kwi-90 ° siye kwi-backsplash (kuba ayinakulunga). Ke nditshintshe imigca yamanzi ashushu nabandayo ukuze amanzi abandayo abe yi-45 ° ukuya kwisinki / kumsebenzisi.
Inkangeleko intle, ukuphakama / ukucoca ngaphezulu kwesinki kulungile, isitshizi sisebenza kakuhle, kwaye yayixabiso elifanelekileyo.
Ifike ngebhokisi elula, incwadana elula, kodwa zonke izinto zikhuselekile.
Ndithathe malunga nemizuzu eli-10 ukukhupha endala, ndicoce kwaye ndifake lo matshini. Funda nje incwadana encinci, kunye ne-bumm… yenziwe. Njengoko ubona kumfanekiso wam, ujongeka umhle, iklasikhi, upholile. Ukuphakama kancinci kunye nobukhulu obukhulu. Akukho nzima konke konke ukufaka.
Izixhobo ezibini ozifunayo: iipleyisi kunye nesitya okanye into yokugcina isinki eyomileyo. Ewe, zimbalwa iitawuli.
Ndiyabathanda ukuba babonelele ngezinto ezimbalwa - ukuba uyayifuna ngenxa yokuba itepu yangaphambili inombhobho omkhulu okanye nantoni na. Qinisekisa ukuba ufakela ipayipi elungileyo. Ziye zaphawula ngombala, luhlaza kunye nobomvu. Nokuba awuyifaki le nto, njengam. Sebenzisa nje i-commonsense yakho ebomvu ukuba ishushu kwaye eluhlaza kuyabanda. Emva kwayo yonke into efakiweyo. Ungalibali ukufaka ubunzima.
Ubunzima buncinci ukukhanya kum. Lumka, kufuneka ufake ubunzima kwicala lasekunene. Ngaphandle koko ayizukusebenza. Le nto, kungafuneka utsale kwaye utyhale itompu kwaye ubone ukuba yeyiphi ephezulu naphantsi - beka ubunzima apho.
Isishwankathelo, itipu efikelelekayo, umgangatho olungileyo, isinyithi- ayizizo iiplastiki ezingabizi. Ukuzinza emva kokufakwa. Ufike ngobonelelo oluninzi onokulufuna. Kulula ukuyifaka kwaye ndicebisa ukuba uyithenge le nto kuba iza newaranti yeminyaka emi-5.
Ukuhlaziywa emva kweeveki ezimbalwa: siyayithanda ngokwenene. Ukumangala, Unokuhlengahlengisa ubude bombhobho. Ewe ukuba awukhethi ixesha elide, beka ubunzima kancinci.
Ijongeka ingcono kunale yam yangaphambili. Le iyahambelana nocwangciso lwam lwangoku olungcono. Kulula kakhulu ukuyifaka. Ndibandakanyile ividiyo yofakelo olusisiseko. Kwakuyixesha lam lokuqala ukufaka ipompo yasekhitshini kwaye ndiyabulela kwiWOWOW. Benza ukuba kube lula kakhulu kwabaqalayo. Ubunzima bungcono kunangaphambili. Inzima kwaye ulwandiso lubuyela umva ngendlela yonke. Endala yam ayibuyanga umva indlela yonke. Ukuhamba kwamanzi kugudile kwaye kuhlala kuhlala kunjalo. Andazi ngeplastikhi nangona. Okwangoku, andinayo nayiphi na imiba kodwa andikwazi ukuxelela ukuba kuzakwenzeka ntoni ekuhambeni kwexesha. Ndiyathemba ukuba izakulunga. Ukuba ujonge ukutshintshwa, jonga. Inamalungu amaninzi ongezelelweyo afakwe kwimeko apho unokuyifuna kamva.
Le tephu esemgangathweni. Kufanelekile kakhulu kwaye ugqibe kunye nolwakhiwo oluqinileyo. Ungahlawula ngokulula ixabiso eliphindwe kabini kwaye le faucet yeWOWOW iya kuba lixabiso elikhulu. Ufakelo lwalulula ngokwaneleyo njengoko iinxalenye ezinikiweyo zazinomgangatho olinganayo. Akukho nto ikhethekileyo malunga noku.
Ifestile yam yasekhitshini ihlala iphantsi kwaye yandisa kancinci ngaphezulu kwesinki, eyenza ukuba ilungele itompu entle enkulu ngakumbi. Nangona kunjalo, icandelo lesiseko kunye ne-lever kufanelekile ngokugqibeleleyo phantsi kwesill. Umzimba ophambili wesiseko ohleli ngaphezulu kumgangatho weplate yobuso umalunga ne-1.8 ”kunye nentamo elingana nesiseko setephu yombhobho yi-approx 1” ubukhulu (imilinganiselo yam ifanelekile, nceda ujonge kubungakanani boqobo kwinto leyo Inkcazo).
Olunye uqwalaselo lwabo banokubanakho ukukhutshwa kwefestile, kukuba isiseko esine-lever sinokujikeleziswa ngaphambili ngexesha lofakelo. Ke endaweni ye-lever ehleli kwicala lasekunene le-faucet (kwimeko yam ibingazukusebenza kuba i-lever ayizukuyicoca i-windows sill, ungasijikeleza isiseko se-90 degrees! Njengoko ubona emfanekisweni, inqanaba liphambi kompompo, endifumana kuwo umsebenzi ngokugqibeleleyo.
Ngokubanzi, ndinika le faucet 5 WOWOW esemgangathweni kunye noyilo. Bendingayazi i-WOWOW brand ngaphambi kokwenza oku kuthenga. Ngoku ukuba ndiyifakile enye ndiziva ndinethemba lokuyincoma. Ndiyazi ukuba ndiza kulithenga olu hlobo kwakhona.
Ndonwabile ukuba ndiyithengile le faucet! Kwakulula kakhulu ukuyifaka, yenziwe isandi kwaye iziva yomelele.
Andizange ebomini bam ndifake i-faucet entsha yekhitshi ngaphambili kwaye ngokuqinisekileyo ndiyibeke ixesha elide ndiyathemba ukuba ndingamunca umntu ukuba andenzele yona, hahaha. Ekugqibeleni ndaye ndagqiba kwelokuba ndinxibe iblukhwe yam yamantombazana amakhulu kwaye ndizame kwaye inkwenkwe ndiyavuya ndiyenzile, yayingumoya! Ukukhupha ipompo yam endala eyayiza nendlu endiyithengileyo kwakunzima ngenene, yayinomhlwa ngaphakathi kwaye kubuhlungu nje entanyeni ukusebenza kwesi sitshixo kwindawo exineneyo. Uthathe iyure eqinileyo ukukhupha into yobudenge.
Ngoku ukufaka i-wowow Single Handle faucet faucet yayinjalo ngokoqobo. Ndiyenzile kwimizuzu engaphantsi kweshumi. Imiyalelo iya kwinqanaba kwaye kulula ukuyilandela. Ukuba uyimisa NGOKUQINISEKILEYO ukuba ifundeka njani imiyalelo, itepu isebenza ngokungakhathali.
Andizange ndiyithande itompu yekhitshi emiyo engena kwindlu nganye. Iphantsi, ayinazinketho, kwaye ngamanye amaxesha inokuba mbumbulu xa ujongene noxinzelelo lwamanzi okanye ubushushu. Kodwa umbono wokuba nditshintshe enye uyandoyikisa kancinci kuba andikaze ndiyenze. Kodwa ngentengiso yamva nje, ndigqibe kwelokuba ndiyinike kwaye ndiyavuya.
Ukufakwa kwakungekho nzima kwaphela. Cima amaxabiso phantsi kwesinki, fumana utsalo ukuze ukhulule iibholiti, kwaye uthathe eyokuqala kwaye ukhuphele entsha njengoko kuyalelwe. Akukho zixhobo zikhethekileyo ziyafuneka, akukho khasethi okanye iglu, okanye nantoni na eyongezelelweyo.
Ndiyayithanda i-arc ephezulu yentamo etepini kunye nokukhululeka kokujika nokucima amanzi okanye kushushu kwaye kubanda nge-lever ngaphambili (ndiye ndayihlengahlengisa kwaye ndayiguqula yajikeleza ubuso obungaphezulu ngaphambili kwecala). Kwaye nokukwazi ukususa intloko kwipompo kwaye uyisebenzise njenge-hose eyandisiweyo iphupha. Kukho neqhosha apho ukuya kwiimo ezimbini ezahlukeneyo, mfutshane okanye ukutshiza okungagqibekanga, kunye neqhosha elincinci lokumisa amanzi xa ufuna.
Yonwabele ngokupheleleyo le mveliso kwaye wonwabe kakhulu ngayo.
Khange usebenzise ixesha elide. Ndiza kuhlaziya ukuba kufuneka njalo. Faucet ifakiwe nje namhlanje ngesinki yekhitshi entsha. Uthando ajonga ngalo kwaye umgangatho ngokubanzi ubonakala ulungile. Utywini lwam wandixelela ukuba uninzi lwezi mpompo zamaTshayina zabelana ngamacandelo afanayo negama kunye nomgangatho ulungile. Uye wakhankanya ukuba uninzi lwabo luza kuphela endaweni yabo emva kweminyaka emi-5. Nditsho neempawu zegama. Kodwa ngexabiso libukeka lihle kwaye libonakala lisebenza kakhulu. Ndonwabile ngexabiso kwaye ndingathi liphe!
Ishishini lam lokurenta lithengile i-6 yazo yokuhlaziya kwiiyunithi ezi-6 kwaye zonke zibukeka zintofontofo. Kulula kakhulu ukuzifaka kwaye iikontraki zam ziyazithanda ukusuka ekubukekeni ukuya kumgangatho.
Ukuza kuthi ga ngoku kuphela i-1 ephukile emva kweenyanga ezi-5 zokusetyenziswa lusapho lwe-6 (abantwana abane). Ndathumela nge-imeyile inkonzo yabo yesiqinisekiso njengoko kubonelelwe kwiwebhusayithi sales@wowowfaucet.com Baphendula ngaphakathi kweeyure eziyi-6 kwaye bathumela enye entsha ngokukhawuleza. Ndifumene entsha ngeentsuku ezi-4. Ewe, leyo yinkonzo emangalisayo yabathengi. Enkosi!
Andikholelwa ukuba ndiyenzile! Andizange ndiyenze into enje ngaphambili. Ukufaka itampu !! Ndicinga ukuba le yinto oqeshe umntu ukuba ayenze! Nangona kunjalo, umxhasi wenkonzo yabathengi undixelele ukuba ndinokujonga nje ividiyo kwaye ndiyenze ngokwam kwaye… uyazi ntoni? BABELUNGILE !! Ndingathi ndibenexesha elinzima lokukhupha eyam indala. Ukusukela WOWOW wenze inqaku lokwenza lula kunye nokulebhelisha yonke into. Phantse akukho buchopho kwinto eya apho! Bade benza ukuba ukuqiniswa kube lula ngokufaka isangqa esikhulu. Ndiyakholelwa ukuba andizisebenzisanga ezinye izixhobo emva koko ukufaka izandla zam. Ekuphela kwento endandifuna uncedo kuyo yayikukuba umntu abambe itompu ngokuthe nkqo njengoko ndiqinisa isikrufu. Nangona kunjalo, unokukwazi ukuyenza ngokwakho. Ingathatha nje ixesha elincinci. Kodwa ndicinga ukuba iyalawuleka.
Kwigumbi lethu langaphambili, sasineefomethi zeDelta ezifakiweyo, ke sonakala kancinci. Xa sasingena endlwini yethu, isinki yasekhitshini yayinombhobho omfutshane omfutshane, ke emva kweenyanga ezimbalwa ndisokola kuwo, ndaqala ukukhangela itompu ephezulu. Ndijonge kwiimpawu zokuphela eziphezulu, kodwa bendingazimiselanga ukukhupha i-200 yeedola + kwimpompo enokuthi ithathe indawo yayo xa silungisa kwakhona. Ndadibana nefowowet wowow kwaye ndanomdla ngenani lohlolo oluhle. Ibali elide elifutshane-wathenga itompu. Ifike kwibhokisi ecocekileyo kwaye enobungcali enezinto ezisikwe ngokukodwa kwi-Styrofoam emnyama. Ukufakwa kombhobho WOWOW kuthathe imizuzu engaphantsi kweshumi, kubandakanya nokususwa kwetephu endala. Eli ziko likhangeleka lithe nca, liphezulu kwaye lisebenza ngokugqwesileyo. Ngaba unayo iiveki ezi-10 - akukho zikhalazo. Uxinzelelo olugqwesileyo lwamanzi, umbhobho ogqwesileyo nosabelayo… okona kubaluleke kakhulu AKUKHO KUVUZA. Ke ndincoma kakhulu (ngethemba lokuba iya kuma uvavanyo lwexesha).
Besihleli kwikhaya lethu ngaphezulu kweminyaka engama-35, ke le nto ubuncinci iseti yesine yeefompo zasekhitshini esizitshintshileyo. Ufakelo luhambe kakuhle kwaye ndiyayithanda into yokuba imigca yokubonelela iza sele iqhotyoshelwe ngoko ke bekungafuneki ukuba ndisebenzise iindlela zam ezikhoyo, kunye nexabiso lalisezantsi kakhulu kunepompo ezi-2 zokugqibela esizifakileyo. Sithathe indawo yegama lophawu lweefonti zekhitshi esizithiyileyo ukusukela kusuku lokuqala kuba kwakungekho xinzelelo kwaye akukho umthamo, amanzi aphuma etepini kumjelo obuthathaka; unengxaki yokudubula i-screen, i-diffuser, i-valves kunye ne-supply lines, umlambo obuthathaka ubangelwe yimipu emibini ubudala. Uninzi loxinzelelo kunye namanzi ngepompo yeWOWOW kwaye siyayithanda inyani yokuba yonke imisebenzi yenziwa kwindawo enye.
Le faucet ilungile kwixabiso kunye nokusebenza kwayo. Yimpompo eqinileyo, eqinileyo, esebenzayo nenesitayile. Bendiyifuna nyani itepu enesitshizi kuyo kwaye ndiyavuya ukuba inesitshizi esirhoxiswayo kwaye sisebenza kakuhle. Kukho ubunzima obuza nale faucet yokufaka ezantsi ukuze isitshizi sibuyisele kwindawo yayo ngokufanelekileyo. Enye into ebaluleke kakhulu kukuba ayibonisi ukushicilelwa kweminwe ukuze ibonakale icocekile. Kulula ukufakela le faucet kwaye umntu onesakhono esiphakathi unokuyifaka ngeYure okanye njalo. Ndonwabile ngokuthenga kwam kwaye ngokuqinisekileyo ndicebisa nabanye.
WOWU!! Imveliso engakholelekiyo yemali, iyifakile kwimizuzu engama-20. Ubone zonke iimvavanyo ezi-5 zeenkwenkwezi kodwa ebesathandabuza malunga nokuthenga. Ndithathe isigqibo sokuba andiyithandi ndizoyithumela. U-odole kwaye akakholelwa kumgangatho. Ukuba ukhangela itompu entsha yasekhitshini kodwa ungajonganga ukuchitha i-300 okanye nangaphezulu le yile FAUCET WANNA YITHENGA !!!! Awungekhe wonwabe ngakumbi kolu kuthenga! Impompo ndiyibuyisele endaweni, ndahlawula i-330.00 iminyaka eyi-8 eyadlulayo, le yinto entle njengayo !! Awuyi kudana nale !!!
Eli lixabiso elimangalisayo. Le faucet ithathe indawo yayo ebibiza ixabiso eliphindwe kane kwaye ibulunga obungcono. Andikwazi ukukuxelela indlela oku kunomdla ngayo. Yenziwe kakuhle kakhulu!
Kwiinyanga kamva; njengoko kuvela, ndilungile injineli.
Bendinexhala lokuba izakuvuza ngaphezulu kokudibana. Akuzange. Le mveliso iqinile
~ kwiinyanga ezimbini kamva, le iseyimveliso enomdla kakhulu. Ndingunjineli, bendinexhala malunga nenqaku lentloko. Ayivuzi kwaphela. Okwangoku, ndincoma le yunithi kakhulu
Sele malunga neveki okoko ndafaka le faucet yekhitshi yeWOWOW kwaye ukuza kuthi ga ngoku ndichukumisekile ngumgangatho. Ufakelo lwalungumoya (lwalundithatha malunga nemizuzu eli-15) kwaye yonke into eyimfuneko (ngaphandle kweeplisi) yeza nepakethe. Ukuba bekuya kubakho nakuphi na ukwehla, amahashe adityaniswe ukusuka kumpompo ngoko ke ukuba elinye lawo liqala ukuvuza ngesizathu esithile, kuya kufuneka ndigqibe ngokutshintsha yonke itepu. Oko kwathethi, andiboni kuvuza, uxinzelelo lwamanzi lukhulu, kunye nolawulo lobushushu. Ukuza kuthi ga ngoku oku kubiza kakhulu xa kuthelekiswa neefompu ezibiza amaxabiso aphantsi endinokuzifumana kwiivenkile zalapha ekhaya. Andililo iplamba yobungcali kodwa kum, le mveliso ijongeka kwaye ivakalelwa kanye njenge- $ 200 ebiza enye endaweni yayo. Ukuba indinika iminyaka eyi-4-5 elungileyo (yeyokugqibela endiyinikileyo), ndicinga ukuba ndingonwaba. Ixabiso elifanelekileyo lemali.
Ndayifaka le faucet yekhitshi malunga nemizuzu engama-30, uninzi lwayo ichithe ukujonga imigca yamanzi. Ingxaki ekuphela kwayo endandinayo yayiyimpompo yam yakudala eyayingazukuvela kuba uqiniseko olomeleleyo lwalunomhlwa. Kodwa, yayingeyona ngxaki inkulu kum leyo yayiyanelisa ukuyisebenzisa.
Imveliso yeza ngebhokisi ephindwe kabini kwaye yahanjiswa ikwimeko engenasiphako. Onke amalungu ebekhona kwaye ikhadi lokufundisa belicacile nangona ndingakhange ndilisebenzise kakhulu (yinto eyindoda). Umjelo wamanzi ulunge kakhulu kwaye akukho kuvuza kwaphela. Ndachukunyiswa kwakhona kukumakisha kumgca wamanzi ophambili wesisindo esinceda ukurhoxisa ulwandiso lwetephu. Zizinto ezincinci ezinje ezikhawulezisa ukufakwa kwaye zithintela iingxaki ezizayo. Ndiyithande kakhulu incindi yokuqinisa iplastiki elingana nesandla sonke kwaye kulula kakhulu ukuyirhuqa ngaphandle kwezixhobo ezifunekayo.
Ndiyalele le faucet ukuba ithathe indawo yompompo ongenantanga ndandiwuthengile eWalmart kwiminyaka emibini edlulileyo .Impompo engenantanga yayisoyikeka ukuba ivuza emva kweenyanga ezimbalwa nasemva kokufaka ezinye indawo phantsi kwewaranti yayiseneengxaki. Le faucet isebenza kakuhle njengoko ichaziwe kwaye ijongeka intle umfazi wam uyayithanda.Kufuneka ndibuyisele ivalve entsha yokuvala ukufakela kundithathe iiyure ezimbini. Ukusebenza phantsi kwesinki yekhitshi ayingomsebenzi omnandi hayi igumbi elininzi lokusebenza kodwa lwenziwe kwaye ndonwabile kakhulu ngeziphumo.
Olu lolona tshintsho lukhulu lomdlalo ekusetyenzisweni kwam kusinki kule ndlu ndathenga kuyo kwiminyaka emi-3 eyadlulayo. Umbhobho wamanzi omdala uyavuza ufefe amanzi aphume ngaphezulu xa ndiza kuwuvula.
Ndithathe isigqibo sokufumana le tephu, kwaye ndiyavuya kuba ndiyenzile. Kuthathe malunga nemizuzu engama-20 ukuyifaka kwaye kwakulula kakhulu. Sebenzisa izixhobo ezisisiseko, kunye nokuqinisekisa ukuba yonke into ilungile.
Ubunzima obongezwe kumbhobho bukhulu kuba umbhobho wokutshiza uyaphuma kwaye uyakuvumela ukutshiza nantoni na. Ndiyayithanda ukuba ibhetyebhetye.
Ukugqitywa kulungile, umgangatho oqinileyo.
Ndonwabile ukuba ndenze isigqibo sokutshintsha.
Ndigqibe kwelokuba ndiyifumane le faucet ukuze intombi yam ibenayo kwigumbi lakhe (kwipropathi yethu) kuba itepu yakhe yakudala yayingumzekelo ophantsi kwaye amanzi ashushu ayekile ukusebenza kuyo. Bendingafuni ukuchitha imali eninzi njengoko bendisenza kwitampu yam yokutsala ezantsi, kodwa bendifuna into eza kusebenza kakuhle kwaye angavuya ngayo. Emva kokufunda uphononongo kule faucet, ndaye ndagqiba kwelokuba ndithathe ithuba ngayo nangona ndingazange ndeva ngale nkampani, wowow. Ndonwabile ukuba ndenzile!
Ixabiso lale faetet, njengoko ubona, lingcono kakhulu kunokhuphiswano olubekwe ngamagama amakhulu. Itepu yayilula ukuba ndiyifakele, nangona yayilixesha lokuqala ukuba ndiyifakele itephu. (Ndihlala ndishiya lo msebenzi kumyeni wam.) Eyona nto yayinzima yayikukufumana umzimba wam otyebe kakhulu phantsi kwesinki nokususa itompu endala. wowow le faucet ipakishwe kakhulu kwaye yonke into imiselwe ukuze ibenokufakwa ngokulula kunye neemfuno zesixhobo esilinganiselweyo.
Intombi yam iyonwabile ngombhobho wayo omtsha kwaye ibeke izimvo izihlandlo ezininzi malunga nokuba "kumnandi" kanjani ukuhlamba izitya zayo ngoku. Impompo isebenza ngokumangalisayo kwaye inomdla kakhulu emehlweni. Yonke into isebenza kakuhle ngaphandle kokuvuza okanye iingxaki emva kofakelo. Enkosi, wowow, ngokwenza lo mfazi azive kamnandi ngaye!
Into yokuqala eyandichukumisayo yindlela ezazipakishwe ngayo ezo bhokisi. Isiqwenga ngasinye sasikhuselwe ligwebu elimnyama leplastiki. Isiqwenga seplate (esetyenziselwa ukuntywila kwimingxunya emithathu) yeza nelaphu laso elimnyama. Ukufakwa kwakulula ngokulula kumyeni wam. Wayekhe wafaka iipompo ngaphambili, kodwa ubunzima obumnyama obabusetyenziselwa ukutshiza isitshizi bohlukile kuye. Ndamenza wabukela iividiyo ngaphambi kokuba aqale ukumnika umbono wento ekufuneka yenziwe. Njengoko kubonisiwe kwividiyo, khange aqinise gasket kakhulu. Uziva ukuba uqinisile ngokwaneleyo. Inkxalabo yam enye kukuba itepu yashukuma kancinci xa ichukumisiwe kodwa akukho nto inokukhathazeka ngayo. Umyeni wam, oqhele ukufumana isiphoso kwizinto endizithengayo, akanasikhalazo ngepompo. Utyhole intshukumo kubuthathaka besinki yethu yentsimbi engenasici kunakwimpompo kwaye walungisa ingxaki ngokubeka ibhodi encinci phantsi kwesinki ngenkxaso eyongeziweyo. Kunzima ukuhamba konke konke ngoku. Ndisebenzise isitshizi kakhulu emva nje kofakelo kwaye ndinike isinki yam engenasinxibe into yokucoca. Kumnandi ukuba nesitshizi ngoba kuye kwafuneka sincame isitshizi secala kweli hlobo xa sifakelwe inkqubo yamanzi okusela. Ungayithanda ukuyibona kwicala lasekunene lomfanekiso wokugqibela. Xa kuye kwaba lukhetho lombhobho wamanzi okusela emngxunyeni ukubuyisela isitshizi, okanye ukufakelwa itephu yamanzi okusela kwenye indawo, ndikhethe ukufaka isitshizi endaweni yaso. Nangona singakhange sisebenzise sitshizi kakhulu, bekukho amaxesha apho bendikhe ndiyiphose. Ikhompiyutha yasekhitshini ifana nompompo wamanzi okusela, kwaye ndibathanda bobabini. Kuqala khange silifumane iqhosha kwintloko yesitshizi esicinga ukuba siyamisa ikhefu ukuze sisebenze, kodwa iyasebenza ngoku. Ngokubanzi, ukuza kuthi ga ngoku ndiyayithanda yonke into malunga netampu ye-WOWOW ekhitshini-inkangeleko yayo, iwaranti yeminyaka emihlanu, isimbo sayo esifanelana neemfuno zethu, kwaye uninzi lwalo lonke amaxabiso.
Ndiyayithanda le faucet. Isiqingatha sexabiso samagama eempawu ezininzi oza kuzibona ezivenkileni nakwenziwe ngokunjalo. Ufakelo lwaluphambene ngokulula! Kwakukho izinto ezi-2 kuphela ezinzima malunga nale faucet. Okokuqala kwakukholisa umfazi ukuba ayifumane ngaphandle kokuyibona kuqala buqu kwaye okwesibini yayikukhupha itepu endala. Damn umntu oyile izikrufu ezindala zeplastiki. Ingcebiso ye-Pro, ukuba unayo kwaye awukwazi ukuyikhupha zigcinele ixesha kunye nomzamo wokungabikho apho kwaye uphume nje uye kubhola kwaye ubambe kakhulu. Ukuba ufunda le nto ubufana nam. Ufuna ukuqiniseka ukuba ufumana itephu elungileyo, kodwa ndithembe mna kunye nolunye uphononongo oluqinisekileyo. Le itephu enkulu kunye nesivumelwano esimnandi!
Ndiyakuthanda ukugqiba nangona kukhaphukhaphu kunokuba bendikulindele. Ndinegama elithandwayo kakhulu kodwa lalinzima. Ukuza kuthi ga ngoku, iyasebenza njengoko bekulindelwe. Okumangalisayo kukuba, ubunzima bokurhoxisa umbhobho wokutsala unzima ngokwaneleyo kangangokuba ubuyisa umva ngaphandle koncedo; kwaye kulungile. Ukusukela ukuba ndinesandla sasekunene, ndiye ndatshintshisa ngemigca yamanzi ashushu nabandayo ukuze nditsale isiphatho phambili samanzi abandayo kwaye ndityhalele amanzi ashushu kuba amanzi abandayo azakusetyenziswa rhoqo Ndingaphinda nditshintshe imigca yamanzi ngaphambi kokufakwa). Ndizifundile uphononongo lwabanye abathengi abanemicimbi kodwa baya kulinda baze babone.
Nangona yenzelwe ukufakwa ngokulula, enye into ebuyayo kukungqinisisa kubunzima obunokurhoxiswa. Umntu kufuneka alumke kakhulu xa evula ukuze akuncamathisele umbhobho. Akukho lula ukuyivula njengoko ibonakala; ke ukuba ayenziwanga ngokuchanekileyo kwaye yonakele, ayisakwazi ukuvala ngaphandle kokusebenzisa umbhobho wombhobho.
Le itephu enkulu! Ukugqitywa kuhle, kodwa okubaluleke ngakumbi yindlela esebenza ngayo. Kudala ndiyisebenzisa iinyanga ezimbalwa, kwaye intloko isanqakraza ngaphandle kokubuyela kumnini emva kokuba uyitsale phantsi. I-engile yetephu intle kwaye iphakamileyo, nto leyo eyenza ukuba kube lula ukucoca iimbiza ezinkulu kunye neepani. Ukuhamba kwamanzi kulula kakhulu ukulawula, siyawuthanda! Kucetyiswa kakhulu!
Ingcinga yam yokuqala yayikukuba, ijongeka intle kwiwebhusayithi kodwa ayinakuba ngumgangatho ophezulu. Ndiphosakele, ndakhawuleza ndachukumiseka bubunzima kunye nokuziva. Ulwakhiwo oluqinileyo kakhulu. Kuze kuza neeadaptha kunye nescreen samanzi esongezelelweyo. Ixabiso elininzi…
Ukufakwa kwakuyimpepho. Lilandele inyathelo ngemifanekiso yenyathelo kwaye liyigqibile kwimizuzu eli-15, kubandakanya nokususwa kwetampu endala. Inut enkulu yokuqinisa iyunithi kwindawo yokuntywila yayintle. Unokufumana ubambiso lokwenyani kwaye uqinise ngokulula.
Izinga lokuhamba liphezulu, ndiyalithanda inqaku lokutshiza njengoko licuthene kuninzi kunoko kungabikho kongezwa okungaphezulu .. Inkangeleko intle, abantu baya kucinga ukuba uchithe iidola ezili-100 ngaphezulu kunokwenza kwakho.
Le nto lulongezo oluhle kwisinki yam entsha ye-SS kwigumbi lam loncedo. Ndenze uhlolo lokufaka kwangaphambili, njengoko abanye becebisile, kwaye andifumananga ngxaki ze-QC ngaphambi kofakelo. Ndiyifakile kwisinki entsha, ke ndiyenzile ngelixa isinki iphumile, ndiqinisekile ukuba incedisiwe. Inkqubo yokuqinisa isebenza kakuhle, kodwa kuya kufuneka uqiniseke ukuba ungafikelela kuyo. Oko kunokuba ngumba omkhulu ukuba awukwazi ukuhambisa isinki. Ifayetethi isebenza kakuhle emva kofakelo; Inemvakalelo entle kwaye ayithontsisi kwaphela. Ndonwabe kakhulu yile yunithi ukuba ndiza kuthenga enye endaweni yompompo ekhitshini!
Siyifakile le faucet ekhitshini lethu kangange veki. Emva kokuba nenkqubo yokuthambisa amanzi ekhaya enombhobho wamanzi one-alkaline efakiweyo ndakhawuleza ndaqonda ukuba ndifuna isitshizi, esikhutshiwe sispalkaline spout. Siyalile le nto kuba ixabiso belingcono kakhulu kunabakhuphisana nabo kwaye kubonakala ngathi izakwenza kutheni sifuna njalo. Khange ndilindele ukuba ipompo esemgangathweni onjalo ngexabiso endilihlawuleleyo. Ndifundile uphononongo oluninzi ukhalaza ukuba itepu ayinamandla okanye ayicofisi ndawo. Kuchanekile yinkqubo enomlinganiso etsala isitshizi sibuyele endaweni yaso emva kokusetyenziswa. Ukuza kuthi ga ngoku ndiyayithanda kwaye andinasikhalazo. Itywina kakuhle xa ingasetyenziswa kwaye ijongeka inomtsalane ekhitshini lam. Ngokuqinisekileyo ndingacebisa nabani na ofuna itompu entle ngaphandle kokophula i-bhanki ukuba ayenze.
Le faucet iyamangalisa ngokupheleleyo. Yimpompo emnandi yexabiso, kwaye ijongeka ilungile njengeepompo zedola eziphezulu phaya. Ukufakwa kwakungekho kubi kwaphela, kodwa ekuphela kwento endinayo kukuba andinandawo iphantsi kwesinki endiza kusebenza nayo. Kuthathe ixesha elide kunale bendiyifuna, kodwa ukuba bendinendawo eyaneleyo phantsi kwesinki yam, ibiya kuba ngumoya !! Yimpompo enesitayile kakhulu, kwaye eyakhelwe kwisitshizi ilungile !! Ndiye ndaqaphela ukuba uxinzelelo lwamanzi lubhetele kakhulu kunompompo wam wangaphambili owawumangalisiwe. Ukuba ucinga ukuthenga le nto, kodwa awuqinisekanga, ndingacebisa ukuba uyenze. Ndandiqala ukuthandabuza kuba nje yayisengaphezulu kunento endifuna ukuyihlawula, kodwa ndayithelekisa nabanye, kwaye andinakukwazi nje ukuhlawula i-100 yeedola kwiimodeli ezifanayo ezivela kwezinye iimveliso. Iidola ezingama-90 koku ngokuqinisekileyo bekufanelekile ngokoluvo lwam. Le faucet iyamangalisa !!
Le yeyona faucet inomdla endakha ndayithenga ndayifaka. Ubunjineli emva kwenkqubo yokufaka iyamangalisa. Nje ukuba ndiyisuse itephu yam yakudala (eyayinzima) kwandithatha malunga nemizuzu eli-10 ukufaka le faucet yasekhitshini yeWOWOW. Kwaye kuyamangalisa kukuba unokubeka isiphatho sokusebenza naphina apho ufuna khona, ngasekhohlo, ngasekunene okanye embindini nangaliphi na ixesha emva kofakelo. Zama oko ngezinye iifompo. Andinakonwaba ngakumbi. Ixabiso elikhulu kunye nesitayile ukuqala.
Ukunyaniseka-andizange ndive malunga newowow ngaphambi kokuba ndithenge le faucet. Ndiyifumene le nto ngokusekwe kuphononongo kwaye ndaye ndagqiba kuyo njengesipho seholide ekhitshini lelungu losapho-ndiyifumene kufanelekile ukuba ihlawule i-80.
Ngaba ilungile- Hayi-ngaba yakhawuleza yaphucula umgangatho kunye nokusebenza ngaphezulu kwento ababenayo ekhitshini labo-Ewe. Ngaba ndingathenga kwakhona okanye ndicebise- Ewe.
Into leyo yapapashwa ngo "fakela phantsi kwemizuzu engama-30," endivumayo ukuba ichanekile. Kundithathe ixesha elide ukususa ipompo endala, kodwa xa uwonke umsebenzi wenziwe ngaphantsi kweyure.
Ndinokuthandabuza kwizinto zeplastiki, kubandakanya ithumbu kunye nobunzima, kodwa zonke zihamba ngokulula kwaye zisebenza ukuza kuthi ga ngoku.
Ukuba ndiyisebenzisile iveki kuphela-ndizakuqhubeka nokujonga ukuvuza okuxeliweyo-kodwa ngokusetyenziswa okunzima kakhulu ukuza kuthi ga ngoku-akukho nto ibonileyo.
Eyona nto intle kule, yayinexabiso eliphantsi kunye nokulula kofakelo- kunye nelungu losapho lwam elincedisa kufakelo (bayilibazisa iinyanga xa bethenga itompu entsha) -bazithembile, ukuba ukuba kukho into engahambanga kakuhle-bayayiqonda indlela ehamba ngayo le nto kwaye baya kuyazi ukuba bajonge ntoni kwixesha elizayo
Ndathenga le faucet kwikhaya lethu langaphambili kwiminyaka emine eyadlulayo, kwaye yayiyeyona nto ilungileyo kuthi. Isebenze kakuhle, ijongeka intle, kwaye bekulula ukuyifaka. Xa sasihamba ehlotyeni, ndazama ukuthanda itepu yasekhitshini kwindlu yethu entsha, kodwa nangona yayiligama eliqhelekileyo, alizange lithelekise. Ndonwabile ukufumana le faucet efanayo isekhona, kwaye ndayifaka kwakamsinya nje ukuba ifike. Kuluyolo ukusebenzisa, kwaye ndiyacebisa kakhulu.
Ndisandula ukuthenga le faucet ngoko ndiphonononga umgangatho wemveliso ngaphandle kwebhokisi kunye nenkqubo yofakelo. Sekuyiminyaka eliqela ukusukela oko ndafaka itephu yasekhitshini. Ukugqibela kwam ukuyifaka ibinekhola ejijekileyo emazantsi etephu enezikhonkwane ezi-2 kwikhola oyomelezayo nge-screwdriver ukuze uqinise umbhobho endaweni. Le faucet inekhola yesandla eqinisa itepu kwaye ndiyifumene ilula ngakumbi kunendlela yokujija. Ndibeka ilokhi eluhlaza okwesibhakabhaka yokutshixa ukuqinisekisa ukuba ayiphumeli kuba ndinayo. Andiqondi ukuba iyimfuneko kodwa itephu endala yaphuma kwaye yiyo loo nto ibitshintshwa.
Ngaphandle kwebhokisi imveliso iyomelele kwaye ibonakala yakhiwe kakuhle. Emva kofakelo kunye novavanyo waziva ubekeke kakuhle kwaye umlambo wamanzi womelele. Xa icinyiwe iqinisekile kwaye akukho drip evela kuyo. Enye into endiyithandayo yayikukuba unxibelelwano lwamanzi ashushu nabandayo aphuma ebhokisini ayemade ngokwaneleyo ukuba angajija ngqo kwiindawo zokuthengisa amanzi. Kwixesha elidlulileyo kuye kwafuneka ndiphinde ndisebenzise ityhubhu ukunxibelelana nonxibelelwano olufutshane phantsi kwesinki. Ufakelo luphela luthathe malunga nemizuzu engama-30, ngaphandle kokukhupha itompu endala. Inewaranti yeminyaka emi-5 kwaye iphantsi kwe- $ 100 ukuba le nto ithathe iminyaka emi-5 kwaye ifuna ukubuyiselwa endaweni mhlawumbi ndingathenga olunye uphawu olunye.
Ndathenga itephu yam kunyaka ophelileyo kwaye ewe yaqala ukuba nedriphu encinci kwisiphatho (ikhatriji) emva kokuba selangeni unyaka (ndiyisebenzisa kwisinki se-BBQ yangaphandle). Ndanxibelelana no-WOWOW kwaye bandiphuthuma ngeqokobhe elitsha (kuthathe iintsuku ezi-5 kuphela ukusuka e-China!). Abandithumelanga kuphela iCartridge, bathumele isixhobo sokususa iCartridge, iringi yokugcina entsha, isikrufu sikaAllen, isikrufu sikaAllen kunye neqhosha elitsha elinombala oshushu / obandayo (bomvu / luhlaza) ukugquma umngxunya apho fikelela kwiscrew sikaAllen kwisiphatho. Ndingusonkontileka wemibhobho onelayisensi kwaye ke kundithathe ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ukutshintsha ikhatriji. SUPER LULA! Ndihlala ndifaka iipompo eziphezulu, ezinye zazo zinemicimbi nayo. Kwinqanaba lamaxabiso le faucet iyamangalisa. Ewe ndinombandela, kodwa benyuka bayawulungisa! Ngokuqinisekileyo ndingathenga le faucet kwakhona!
Ihanjiswe ngorhatya olunye. Ndithathe itepu endala ndayibeka enye ngelixesha umfazi wam epheka isidlo sangokuhlwa. Ewe ilula kanjalo. Andingombumbi ngemibhobho nje ndiyindoda eqhelekileyo. Ngoku ukuba awunakukwazi ukujikeleza indlu kuya kuthatha ixesha elide kodwa ukuba unengqiqo eqhelekileyo, gxuma ungene kuyo. Le nto yayibhokswa ngathi ixabisa isigidi seedola. Ukugqitywa kwakulungile kwaye kuyamnandi. Umntu othile wakhankanya ukuba eyabo yayinedriphu okanye ukuvuza xa iifeksi zefektri ziqhotyoshelwe kumbhobho. Ndiyaqinisa kancinci nje kancinci. "Musa" ukuqinisa ngakumbi okanye uya kuba neengxaki. Ungajika isiphatho ujikeleze nakoluphi na ulwalathiso olufunayo, ngasekhohlo, phakathi okanye ngasekunene. Siyayithanda. Ndiza kuthenga enye. Kutheni uhlawula i- $ 7 yoku. Gcina onke amaphepha akho kunye namanye amalungu. Ndifunde iingxelo ezininzi malunga nomsebenzi omkhulu. Yonwaba. Yonwabele.
Esona sizathu sokuba ndiyinike inqanaba leenkwenkwezi ezi-4 kungenxa yokuba ndiyifakile kuphela. Ndingayiphucula okanye ndiyithobele indlela endiyisebenzisa ngayo. Njengabaninzi, ndihlala ndikrokrela xa ndibona ixabiso elinje- uyayifumana into oyihlawulayo, akunjalo? Ndimele nditsho ukuba ukuza kuthi ga ngoku ndichukumisekile. Ibhinqa elingatshatanga lifake oku ngokukhawuleza. Imiyalelo icacile. Ndihlala ndisebenzisa ityhubhu yokutywina kwimisonto. Yimpompo entle kakhulu kwaye yenza kanye le nto ndiyifunayo kwaye ndiyayithanda. Kwaye… intsha ke ngoko siza kubona ukuba isebenza njani ngokuhamba kwexesha. Qiniseka ukuba ubhalisa iwaranti yeminyaka emi-5 kwiwebhusayithi yabo. Awudingi ukuthenga i-inshurensi yemveliso eyongezelelweyo… ..njengoko ndenzile. Ngandlela thile ndiliphosile ulwazi lwewaranti xa ndiyithengile. Ukutshintshwa okugcweleyo kwisithuba seminyaka emi-5 kwimveliso ephosakeleyo. Ucinga ukuba ndiphumelele ukungenisa oku ngoku ndiza kuthi ndonwabile ngokuthenga kwam. Ngamaxesha anqabileyo ubunzima buyehla kodwa oko kunokuba yinto elula ukulungisa ngetape encinci. Ndiyayithanda.
Okokuqala kwimveliso kujongeka ngathi itompu ebiza kakhulu ngaphandle kwebhokisi. Ixabiso elimangalisayo lokuba ibukeka njani ipompo. Isebenza ngokungenamakhwiniba. Ikwakhangeleka intle ngesinki yethu entsha engenasinxibo - ziyahambelana ngokugqibeleleyo. Xa ndafaka i-plumbing faucet and sink sasinengxaki enye encinci. Ithumbu lokutshiza elize nombhobho wethu lalide kangangokuba lalithanda ukubanjwa kwezinye izinto ezifakwe kwisinki engezantsi. Lo yayingumbandela uyilo phantsi kwesinki yethu kwaye ingengombandela wompompo. Ndanxibelelana nalo mthengisi kwaye bandazisa ukuba baya kwenza isiko lokutshiza elifutshane ukunciphisa umba wethu. Yazi le ngxaki le ibiyingxaki ebangelwe yimibhobho yamanzi phantsi kwesinki kwaye ingeyiyo imveliso evelayo. Le nkampani isandula ukundithumela ithumbu lesiko abacebise ukuba liyakunceda ukunciphisa umba wam. Isebenze ngokugqibeleleyo. Le nkampani kunye neqela labo lenkonzo yabathengi liye ngaphezulu nangaphaya kwalo naluphi na uncedo endilufumeneyo ngaphambili ngezinto ezithengwe emgceni. Ukukhwaza okukhethekileyo kuNick kunye neqela lakhe ngokuya ngaphezulu nangaphaya ukunceda kumba wethu. Ngokuqinisekileyo ndiya ku-odola kuwe xa kulungiswa igumbi lokuhlambela. Enkosi ngako konke okwenzileyo kulo mthengi wanelisekile.
Iteyipu ibipakishwe kakuhle kwaye ibekwe kumagwebu ukuxhasa ukukhusela ekuthumeleni. Icandelo labhalwa kwiibhegi ezincinci zokutshixa. Babandakanya namanye amalungu.
Kwakulula kakhulu ukuyifaka. Imiyalelo yesiNgesi enemiyalelo echanekileyo. Kusithathe iiyure eziyi-1.5 ukususa okudala kunye nokufaka okusha. Sithathe ingcebiso yomnye umvavanyi ocebise ukubuyisela umva kwimigca eshushu nebandayo ukuze kushushu kunokuba yinto yokubuyisa umva kwaye kubanda ukutyhalela phambili. Oluqwalaselo lwalulunge ngakumbi kusapho lwethu. Enye into esiyitshintshe kukudibanisa ubunzima obudala kunye nobutsha. Okutsha kusebenze kakuhle kodwa ubunzima obongezelelekileyo bebungcono.
Ixabiso lalilungile kwaye alikho ngexabiso eliphantsi ukujonga nangayiphi na indlela.
Ndingayincoma kwaye ndiza kuyithenga kwakhona.
Sele iinyanga ezimbini sifakile itepu kwaye ukusebenza kwayo kuyinkwenkwezi.
Ndincede umhlobo wam ukufaka le faucet ekhayeni lakhe kwaye ndonwabile sisiphumo, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyifake kwikhitshi lam lemoto. Umvelisi uquka iiadaptha ezimbini zokuguqula ukusuka kumanqanaba amanzi ahlukeneyo. Ndiyayixabisa loo nto ichukumisayo. Kwakhona, inut esetyenziselwa ukubopha itepu esinkini ine-3 'ende' yokubambelela 'eyakhelweyo, ke ukuqiniswa kokugqibela kunokufezekiswa ngokulula ngesandla, ngaphandle kokufuna isikrufu. Inxalenye enzima yayikukufumana ityhubhu endala. Nje ukuba kwenziwe oko, ukufaka le yayiyimpepho ehambelana nayo.
Ndiyayithanda le faucet yekhitshi kwaye bendiyisebenzisa iinyanga ezimbalwa ngoku kodwa, ukusetyenziswa kwakho kungahluka ngenxa yayo nayiphi na into oqhele ukuyisebenzisa ngepompo yakho yokugqibela.
Ndenze uhlengahlengiso lomzimba nolwengqondo ezimbalwa kwaye ngoku ndinamava angcono kakhulu ndisebenzisa wowow. Makhe ndibelane nawe.
1. Ndagcina ubunzima obuncinci ukusuka kumbhobho wam wokugqibela ndaphinda ndawusebenzisa… obunye babubandakanya ukungqubeka kwivelufa yam yamanzi phantsi kwesinki.
2. Ndijike isiphatho saya ngaphambili, bendingafumani sibambo sisecaleni, kwaye izandla zakho zimanzi kwaye ngokuqinisekileyo ziyavuza elungqamekweni, ngelixa ngaphambili, akukho bumdaka. Kwaye isiphatho sifutshane ukuze kungabikho ngxaki ukuphuma okanye ukuvimba iimbiza okanye iipani.
3. Ukuthetha ngesiphatho esifutshane… uluhlu "luncinci" kwesi sibambo. Ke ngokwengqondo kuya kufuneka ulungelelanise… 1 ″ kwaye uphume ngokupheleleyo! Tsala ngobumnene i-1/4 ″ ukuphuma kwaye uhambe ukusuka apho. Kukhululekile kancinci ke oko kuyatsala kwaye kujike kube lula kakhulu… kulula kakhulu kum, kodwa ndakuba ndiyoyisile kwaye ndayeka ukubuyela ekuphatheni isiphatho… ngobunono, ndifumene amaqondo obushushu afanelekileyo kunye nokuhamba.
Le yingxoxo enkulu kwaye kum, ijongeka ingcono kunompompo wam wokugqibela kwaye ndakuba ndiziqhelanise nezinto ezizodwa zesiphatho sevalve, ndiziva ngathi isebenza ngcono kunompompo wam wakudala ophakamileyo wasekhitshini.
Oku kubonakala kuyindlela eyenziwe kakuhle kwaye efikelelekayo kwezinye iimodeli ezaziwa ngcono. Kuza neethumbu eziguqukayo zangaphambi kokudityaniswa kunye neenxalenye zonxibelelwano ezivumela ukuvumela olunye unxibelelwano ukuba luyimfuneko. Ndilandele isindululo sombuyekezi wangaphambili kwaye ndangqinisisa ukuqina koqhagamshelo lombhobho kwitepu ngaphambi kofakelo lwangempela, ndingaqinisekisi ngokuvuza. Ukufakwa konke kwakukhawuleza kwaye kulula. Ndonwabe kakhulu ngentsebenzo. Kuya kufuneka uphinde uhlengahlengise indawo yobunzima obufakiwe obufakwe kumbhobho phantsi kwesinki ukunceda ukukhupha ithumbu ukuze uhlale urhoxa, kodwa le yinkqubo elula.
Ndifakele iipompo zasekhitshini ezingenakubalwa ebomini bam, oku kude kwaba yeyona ndawo icocekileyo, ekhawulezayo nolula kakhulu. Logama nje begcina umgangatho wabo wangoku, ngekhe ndize ngelinye igama lophawu. oku kubetha nayiphi na impompo yexabiso eliphantsi elithengiswe yiHome Depot okanye nguLowe. Ukuhamba kwamanzi kugqwesile, ukucima ivalve kusebenza ngokugqibeleleyo akukho giphu ukutshintshela kwi-gamma phakathi kokutshiza kunye nokuhamba yimpepho kwaye indawo yekhefu imnandi kakhulu. Ndingacebisa kuphela ukuba benze ukhuseleko lwenkomo. Ndikwacebisa ukuba babenee-studs ezimbini kunye namaphiko eplastiki okuqinisa ipleyiti enemingxunya-3. kungenjalo kwaye ngokupheleleyo Superior imveliso ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Ndiyithandile into yokuba le nto ibichazwe kanye njengoko ichaziwe. Ukongeza, yayipakishwe kakuhle kwiipakethe ezibunjiweyo ngononophelo. Imikhombandlela elula yabonakala kwangoko. Okokugqibela, ufakelo lwalungumoya. Nangona i-DIYer engenamdla inkqubo ayinakuba ithe ngqo phambili. Kudala ndonwabela imveliso yokugqibela kwiintsuku ezimbalwa ngoku.
Le yimpompo eyenziwe kakuhle kakhulu enoluvo olunzima oluqinileyo. Ukuguqula zombini isiphatho setephu kunye nefayiti ngokwayo ekunene ukuya ekhohlo kubonelela ngexabiso elifanelekileyo lokuxhathisa ngokungafani nezinye iindlela zokwakha ezinomgangatho omncinci. Ukongeza imigca yamanzi ashushu nabandayo yimigca yentsimbi eboshiweyo kwaye ayiboneleli ngokuzinza okungcono kodwa ikwabonakala intle ngobuhle. Ufakelo lwalulula kakhulu, ngokulula njengokuboniswa kwividiyo yemveliso. Ihardware ibandakanya ipleyiti yokugubungela efanayo xa isinki sakho sinemingxunya emithathu. Iinkwenkwezi ezi-3 ezilula.
Ndiyayithanda. Ndifakele itephu yam entsha izolo endaweni ye-Moen faucet eneminyaka eyi-7 ekunzima ukuyijika. Ndijonge kumagama amakhulu ndaza ndabafumana beqala phantse kabini ixabiso leyunithi. Ukufakwa kwakulula. Ukususwa kwetephu endala kwakunzima kakhulu kuba i-nut enyukayo yayinzima kakhulu ukufikelela kuyo kwaye ifuna isikrufu setephu. Iyunithi entsha ayenzi kwaye ingene lula. Imiyalelo ibhalwe ngesiTshayina / naseMelika kodwa iyaqondakala. Ijongeka ngathi ziimpawu zexabiso ngokugqitywa kakuhle. ndingayithenga kwakhona.
Bendinokuthandabuza kancinci uku-odola itompu kwi-intanethi, kodwa emva kokufunda uphononongo ndaziva ndibhetele malunga nokuthenga i-WOWOW Faucet. Mfana ndonwabile ukuba ndenzile. Ndifumene itephu yombane kwi-wowow, ndayifaka ngokulula, ngokulula kunayo nayiphi na enye itephu endiyifakileyo. Ndandinomcimbi omnye, umgca wamanzi abandayo wawufutshane, kodwa ingeyiyo eyikaWOWOW, yayingam. Ndibathumelele i-imeyile kwaye bandithumelela umgama omde wasimahla ngaphandle kwentlawulo kwaye ndivakalise. Ndiyifakile nje kwaye ilungile! Kulula kakhulu! Siyayithanda le faucet yakhiwe kakuhle, kulula ukuyicoca kwaye ijongeka intle! Ukufakwa kulula kakhulu. Umbhobho wokutshiza ugudile kwaye ulawula kakuhle. Zonke ii-pluses apha!
Ndingalindelanga ndifuna itompu entsha yasekhitshini. Kubonakala ngathi nantoni na entle eLowe's $ 200- $ 300. Ukuwajonga nje kwakundinika ixhala. Ndithathe isigqibo sokuthatha ithuba kwaye ndi-odole le faucet kwiWOWOW. Bendinexhala lokuba ingabiza ixabiso eliphantsi. Inkwenkwe ndiphazamile! Le tephu ilunge kakhulu, kulula ukuyifaka, iza nazo zonke iziqwenga ezifunekayo. Iza neendlela ezintsha zokuhambisa amanzi, bendingayilindelanga loo nto! Eyona nto ilunge ngakumbi kukuba ijongeka ingcono kunayo nayiphi na into endiyifumene kwaLowe, ethe kratya kwaye yanamhlanje. Emva kokuyithenga ndiye ndabona ukuba zizidenge kuphela ezichitha amakhulu eedola kwiipompo ezivela kwiivenkile ezinkulu zehardware.